नक्कली पत्रकार कार्ड बनाएर ५ सयमा बेच्ने गिरोह पक्राउ ! - Media Dabali
नक्कली पत्रकार कार्ड बनाएर ५ सयमा बेच्ने गिरोह पक्राउ !
काठमाडौं- प्रहरीले पत्रकार र स्वास्थ्यकर्मी हाे भन्दै सर्वसाधरणका लागि नक्कली कार्ड बनाएर ५ सय रूपैयाँ भन्दा बढीमा बेच्ने गिराेह पक्राउ गरेकाेफ छ ।
मंगलबार काठमाडौँको बागबजारबाट महानगरीय अपराध नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दीपक थापाले नवलपरासीका लक्ष्मण न्यौपानेले बागबजारमा सञ्चालन गरेको कालिका प्रिन्टर्स स्पोर्टस प्रालिमार्फत विभिन्न व्यक्तिको नामबाट अस्पतालका कर्मचारी र पत्रकारको नक्कली परिचयपत्र बनाई प्रतिकार्ड रु ५०० भन्दा बढीमा बिक्री वितरण गर्ने गरेको फेला परेको जानकारी दिएका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा न्यौपानेसहित बर्दिया घर भई कोटेश्वर बस्ने श्रीराम खड्का, नवलपुरासी सुस्ता पूर्व कावासोती घर भई काठमाडौँ भीमसेनगोला बस्ने रमेशकुमार रेग्मी, स्याङ्जा जगत्रदेवी घर भई हाल धापसी बस्ने राजेन्द्रराज भण्डारी रहेको थापाले बताएका छन् ।
उनीहरुलाई कारवाहीका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ बुझाइएको छ। उनीहरुबाट विभिन्न मिडिया, अस्पताल र प्रिन्टिङ प्रेसको नक्कली परिचयपत्र तथा परिचयपत्र बनाउन प्रयोग हुने उपकरण बरामद गरिएको छ।
कामठाडौंमा पहिरो : पुरिएर दुईको ज्यान गयो
काठमाडौंमा २ पैदल यात्रुले प्रहरी कुटे
काठमाडौं उपत्यकामा कर्फ्यु !
रथ तान्ने नाममा प्रहरीदेखि पत्रकारमाथि हातपात, फोटोपत्रकार क्लबद्वारा आपत्ति
नाकामा सेना ! उपत्यका प्रवेशमा कडाइ ?
आइतवार, भाद्र २१ २०७७०२:११:५२